မြန်မာ, 30 ဇွန် 2017
30 ဇွန် 2017 သောကြာ
ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာအလုပ်သမားတွေအရေး ၂ နိုင်ငံ ဆွေးနွေး
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားတွေအပေါ် တင်းကြပ်တဲ့ဥပဒေ ပြဌာန်းလိုက်ပြီးနောက် မကြာသေးခင်ကစလို့ ဖမ်းဆီးမှုတွေ တိုးမြှင့်လာနေတဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အခက်ကြုံနေရတာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ ၂ နိုင်ငံတာဝန်ရှိသူတွေ ဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။
သတင်းအကျဉ်းချုပ် ၀၆. ၃၀. ၂၀၁၇
ရခိုင်အရေး ကုလစုံစမ်းရေးအဖွဲ့ကို လက်ခံဖို့ အကဲခတ်တွေ တိုက်တွန်း
ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အချက်အလက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကို မြန်မာအစိုးရက လက်မခံဘူးဆိုရင် နိုင်ငံတကာရဲ့ ယုံကြည်မှုကို လျော့ကျစေပြီး ဆန့်ကျင်ဝေဖန်တာတွေ ပိုမိုမြင့်တက်လာနိုင်ကြောင်း မြန်မာအရေးသုံးသပ်သူတွေက သုံးသပ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ မကြာသေးခင်တုန်းကပဲ အာဏာပိုင်တွေက ဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့တဲ့ သတင်းသမားတွေကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့နဲ့ သတင်းမီဒီယာ သမားတွေ အပါအ၀င် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုတွေကို ဖိနှိပ်တဲ့ ဥပဒေကို အဆုံးသတ်ရေး ရန်ကုန်မြို့မှာ ဒီကနေ့ပဲ မီဒီယာသမားတွေနဲ့ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
မြန်မာလုံခြုံရေး အကြံပေး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် သွားမည်
မြန်မာနိုင်ငံကနေ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကိုထွက်ပြေးလာတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကို မြန်မာပြည်ပြန်ပို့ရေးကိစ္စအပါအ၀င် နှစ်နိုင်ငံ အကြား ဖြေရှင်းရခက်ခဲနေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေအပေါ် အမြင်ခြင်း ဖလှယ်ကြဖို့ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေး ဦးသောင်းထွန်းဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျ နိုင်ငံကို နောက်သတင်းပတ်ထဲမှာ ရောက်လာဖို့ရှိတယ်လို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျကလာတဲ့ သတင်းတွေမှာဖေါ်ပြထားပါတယ်။
၆၆ (ဃ) ဖျက်သိမ်းရေး ပြည်တွင်း ပြည်ပ လူ့အခွင့်ရေး ၆၁ ဖွဲ့ တောင်းဆို
ပုဒ်မ ၆၆ (ဃ) ကို ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ ပြည်တွင်းနဲ့ နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ စုစုပေါင်း (၆၁)ဖွဲ့က မြန်မာအစိုးရကို တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ အများပြည်သူနဲ့ မီဒီယာ အပေါ် ဖိနှိပ်တဲ့ ဒီဥပဒေကို ဖျက်သိမ်းဖို့ ပြည်တွင်းမှာ လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေက အင်နဲ့အားနဲ့ ဆောင်ရွက်နေချိန် အခုလို နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့တွေကပါ ပူးပေါင်းပါဝင်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရခိုင်အရေး ကုလအဖွဲ့ မလာဖို့ တားမြစ်မှုအပေါ် အမြင်များ
ကုလသမဂ္ဂက ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ ရခိုင်ဒေသတွင်း လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှု စုံစမ်းမယ့် အချက်အလက် ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင်း လာရောက်ခွင့် ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ မြန်မာအစိုးရက ငြင်းဆိုလိုက်တာဟာ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းတဲ့နည်းလမ်း မဟုတ်ပဲ အခြေအနေတွေကို ပိုဆိုး လာစေမှာဖြစ်တယ်လို့ A.I ခေါ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ကြီးက တုန့်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
ရခိုင်အရေး ကုလအချက်အလက် ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ ပြည်ဝင်ခွင့်ပေးမည်မဟုတ်ဟု ဒုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဆို
“ ကျနော်တို့ အနေနဲ့ Fact Finding Mission စေလွှတ်တဲ့ အစီအစဉ်ကို ကန့်ကွက်ရန်ပြုနိုင်သော်လည်းပဲ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ Mandate နဲ့ ဖွဲ့စည်းတဲ့ အဲဒီ ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုသော်လည်းကောင်း အဲဒီ Mission ကနေပြီးတော့ အစီရင်ခံစာ ပြုစုတင်သွင်းခြင်းကို ဟန့်တားနိုင်တဲ့ အနေအထားရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကိုတော့ လာရောက်ခွင့် မပြုဖို့ အတွက် မြန်မာသံရုံးတွေကို လိုအပ်တဲ့ ညွှန်ကြားမှုများ ပြုလုပ်ကာ တားဆီးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။"
ထိုင်းအလုပ်သမားဥပဒေသစ် ထုတ်ပြန်အပြီး၊ မြန်မာအလုပ်သမား ၃၀၀၀ ခန့် ဌာနေပြန်ရေး စိုင်းပြင်း
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေသစ်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီး ပညာပေးအနေနဲ့ အဖမ်းဆီးတွေဆက်တိုက်လုပ်နေတာကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းမှာ မနေထိုင်ရဲတော့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားများဟာ သက်ဆိုင်ရာ လူဝန်မူကြီးကြပ်ရေးရုံးတွေမှာ နေရပ်ပြန်မဲ့ အကြောင်းကြားမူတွေက ဇွန်လ ၂၉ရက်နေ့ ကဆိုရင် လူ၃ထောင်လောက် ထိရှ်ိလာတယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။
၆၆ (ဃ) နဲ့ မတရားသင်းဆက်နွယ်မှုဥပဒေပယ်ဖျက်ရေး၊ တိုင်းရင်းမီဒီယာညီလာခံတောင်းဆို
“သတင်းသမား ၃ ဦးဖမ်းခံရတဲ့ကိစ္စဆိုရင်လည်း တရားမ၀င်အသင်းနဲ့ ဆက်သွယ်မှုနဲ့ တကယ်တမ်းဆိုရင် သတင်းသမားက သတင်းသွားယူတယ်၊ ကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်တာပေါ့နော် မတရားသင်းနဲ့ ဆက်သွယ်မှု ပုဒ်မတွေ အဲဒီလို ဥပဒေတွေက ကျမတို့ မီဒီယာသမားတွေအတွက် အဟန့်အတားတွေဖြစ်စေတာပေါ့နော်။"
မြန်မာ့တပ်မတော်နဲ့တအာင်းပလောင်တပ်ဖွဲ့TNLAတို့အကြားဖြစ်ပွါးခဲ့တဲ့စစ်ရေးတင်းမာမှုကြောင့် ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းနမ့်ဆန်မြို့နယ် မန်လန်းကျေးရွာသား(၃၀၀)ခန့်ဟာလားရှိုးရောက်ရှိနေသလို အနီးဝန်းကျင်ရွာနဲ့ နမ္မတူ ကျောက်မဲမြို့နယ်ဘက်မှာ တိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။
ထိုင်းမှာ မြန်မာတွေ ဖမ်းဆီးခံရမှုတိုး
ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းမှာ နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဥပဒေသစ် ထွက်လာပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာတော့ အဖမ်းအဆီးတွေက ဆက်တိုက်ဆိုသလို ရှိလာသလို တာ့ခရိုင်တွင်းက မဲဆောက်မြို့ အပါအ၀င် မြို့နယ်တချို့မှာ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ စစ်ဆင်ရေး တခုလို ဖမ်းဆီးလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။